शाकाहारी व्यञ्जन - परिकार - साप्ताहिक
साउन महिनाभरि कतिपय मानिस शाकाहारी हुन्छन् । साउनमा भगवान् शिवको व्रत बस्ने वा साउनभरि मांसहारी भोजन नगरी वर्षमा एक महिना शाकाहारी हुनेहरू अहिले बग्रेल्ती भेटिन्छन् । भोजन विशेषज्ञहरू पनि वर्षायाममा शरीरलाई स्वस्थ बनाउन शाकाहारी र हल्का भोजन गर्नु राम्रो हुने बताउँछन् । शाकाहारी भोजनमा पनि के खाने–के नखाने भन्ने दोधार हुन्छ । रेस्टुराँ वा होटलका शाकाहारी परिकारमा मिसावट हुने डर पनि हुन्छ । त्यसैले स्वादिलो शाकाहारी परिकार घरमै पनि बनाउन सकिन्छ । यो विकेन्डमा जाँगर चलाएर यी शाकाहारी परिकार बनाउनुहोस् र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि चखाउनु होस् ।
अनारका दाना, बदाम, ओखर, ब्रो काउलीका टुक्रा, ठूलो गोलभेंडाका टुक्रा, उसिनेर स्लाइस गरिएको तोफुको टुक्रा, उसिनेको सिमी मिसाएर एउटा कचौंरामा खन्याउने, त्यसको माथिबाट स्वाद अनुसार ओलिभ तेल हाल्ने । नुन हाल्न मन लागेको खण्डमा मात्र हाल्ने नत्र नहाल्दा पनि हुन्छ ।
३० मिनेटसम्म पानीमा भिजाइएको दुई कप बासमती चामल, दालचिनीको धुलो, जिरा, तेजपत्ता, अलंैची, अदुवाको सुक्खा धुलो, सौफ पाउडर, काजु, थोरै केसर, दुई चम्चा सनफ्लावर तेल, नुन तथा पानीको व्यवस्था गर्नुहोस् । कराहीमा तेल तताउनुहोस्, सबै मसला हालेर चलाउनुहोस् । तेल सुगन्धित भएपछि आगोको राप कम गर्नुहोस् र त्यसमा सौफको धुलो हालेर चलाउनुहोस् । अब भिजेको चामललाई निथारेर हाल्नुहोस् र चलाउनुहोस् । केसर मिसाउनुहोस् । केहीबेर चलाएपछि पानी र नुन हाल्नुहोस् र कराहीलाई छोप्नुहोस् । अब चामल पाकुन्जेल गार्निस तयार गर्न तिर लाग्नुहोस् । फ्राइप्यानमा दुई चम्चा तेल तताएर त्यसमा प्याज र थोरै नुन हाल्नुहोस् । प्याजको रंग सुनौलो भएपछि त्यसलाई निकाल्नुहोस् । त्यही तेलमा बदाम, काजु तथा तेजपत्ता हालेर केहीबेर भुटनुहोस् । सात मिनेट जतिमा पुलाउ तयार भैसकेको हुन्छ । अब केहीबेर छाडेर पुलाउ माथि गार्निस हाल्नुहोस् । काश्मिरी पुलाउ तयार भयो ।
सोया वा बदामको दूध अथवा तताएर सेलाएको डेरीको दूधमा स्वादअनुसार चिनी र बरफको टुक्रा हालेर मिक्चरमा मिक्स गर्ने । स्वादका लागि यसमा केरा, स्ट्रबेरी, जामुन आदि पनि मिसाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित :श्रावण ९, २०७४
मिस बमबमलाई मांसाहार
साउनमा मुख बार्नुहुन्छ, किन ?
डाक्टर पनि कलाकार बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्दैछु
नेपाली चलचित्रका भेजिटेरियन
दीपाश्री निरौला शाकाहारी
म:म ब्रान्ड मंसिर २१, २०७५
आहा ! म:म मंसिर १७, २०७५
मलेखुका स्वादिष्ट माछा मंसिर ३, २०७५
किन खाइन्छ मिठाई ? कार्तिक २०, २०७५
केही प्रसिद्ध मिठाई कार्तिक १८, २०७५
मटन कबाब कार्तिक १, २०७५
साँधेको खसीको मासु कार्तिक १, २०७५
मटन अफगानी ग्रेभी आश्विन ३१, २०७५
भुटन भनेपछि हुरुक्क आश्विन २८, २०७५
दसैंका लागि स्वस्थ्य खानपान आश्विन २६, २०७५